ဆရာဝနျတဈဦး သုံးသပျပွတဲ့ စိုးရိမျစရာကောငျးတဲ့ မွို့ရနျကုနျ – Daily Feed MM
Admin_John | June 14, 2020 | Knowledge | No Comments
ယခု သတငျးကို ( Dr.Myo Htet Aung ) စာမကျြနှာ မှ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ မြှဝေ တငျဆကျခွငျး ဖွဈပါသညျပေါ့ဆမှုကွောငျ့ ကိုဗဈ စိုးရိမျရမှေတျ နီးလာပွီဖွဈကွောငျး ပွငျးပွငျးထနျထနျ သတိပေးလိုကျတဲ့ ဆရာဝနျတဈဦးရနျကုနျကတော့ ဆရာဝနျ အမွငျအရ စိုးရိမျရမှေတျနဲ့ နီးနီးလာပွီ လူတှလေညျး အရငျလို အမြားကွီး၊ ကားတှလေညျး ပွနျပိတျ၊ လကျဖကျရညျဆိုငျ ပွနျထိုငျကွ၊ ဆငျ‌‌ခွဖေုံးတှမှောဆို ဘီယာဆိုငျတှတေောငျ နပေူသလိုလိုနဲ့
လေးတှကောပွီး ဆိုငျမှာ ပွနျသောကျလို့ရပွီ။ဆိုကျကားဂိတျတှမှော ဈေးတှမှော ပွနျစညျကားပွီ။ ရပျကှကျလူကွီးတှလေညျး ရနှေေးကွမျးဝိုငျးနဲ့ အေးအေးလူလူဝိုငျးဖှဲ့ဆှေးနှေးလို့။ စားဝတျနရေေး ထှကျတာတငျမက အငျယားကနျစောငျးမှာလညျး အလညျအပတျထှကျသူတှေ အရငျနီးပါးပွနျဖွဈနပွေီ။ဒါပမေယျ့ mask ကို သခြောတတျသူက တဈရာမှာ ဆယျယောကျ၊ နောကျ သုံးဆယျက မေးစမှေ့ာ၊ ခွောကျဆယျကတော့ တပျကို မတပျတာ။ အေးလေ
ဘာတပျစရာလိုလဲ၊ မှနျးကမှနျးပါဘိသနဲ့၊ ဒီလောကျပူတဲ့ ရာသီဥတုမှာ။ စားဝတျနရေေးက ရှိသေးတယျ။ ထှကျရမှာပဲ။ ဒါက လကျလုပျလကျစား အတှေး။အငျးယားကနျသှား၊ အိမျမှာလူစူ၊ ဝိုငျဘီယာသောကျနသေူတှကြေ ဒီ ကိုဗဈက အဲ့လောကျလဲမဆိုးပါဘူးကှာ။ နာမညျကြျောတှတေောငျ အိမျပွနျသှားပွီ။ လူတှကေိုက အကွောကျလှနျတာပါ။ လာ မကျကရိုသှားတိုးမယျ။ အလကား ဒို့အစိုးရကို အပုတျခခြငျြလို့ အကယျြခြဲ့တာ၊ အခု ဘာဖွဈလဲ အေးဆေးပဲကို။ ဒါ လကျမညျးတှေ ခွောကျနတော။
အခု လူနာနညျးတယျ ကသြှားတယျဆိုတာ သင်ျကွနျတုနျးက ငွိမျနခေဲ့တဲ့ အကြိုးကြေးဇူး၊ ဒါကို တကယျကတြယျထငျပွီး ပွနျထှကျရငျ ပွနျတကျဖို့ သခြောသလောကျပဲ။တကယျလုပျနတေဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှကေတော့ မကျြခုံးလှုပျနပွေီ။ ကိုယျ့ အ‌ခွအေနကေိုယျသိတာကိုး။ ဒါ လကျကုနျထုတျထားတာ။ အောကျက ကိုးနဲ့ ရှိုးနရေတာဆိုတော့။ နညျးနညျးလေးပွောမယျ။အခု ရနျကုနျမှာ ကိုဗဈကုတဲ့ ဆေးရုံ သုံးခုရှိတယျ။ ဝဘောဂီ၊ တောငျဥက်ကလာ နဲ့
ဖောငျကွီး။ ဝဘောဂီမှာ အသကျရှုစကျနဲ့ ICU 15 လုံးရှိတယျ။ တောငျဥက်ကလာမှာ ICU 15 လုံးရှိတယျ။ ဖောငျကွီးမှာ လကျရှိ ICU. 10 လုံးရှိတယျ။ ဒါအကုနျပဲ။လကျရှိ။ ဖောငျကွီးက ပိုဆိုးလာရငျ နောကျထပျ ICU ကုတငျ 30 ထပျတိုးနိုငျမယျ ပွောတယျ။ ရိုးရိုးလူနာအတှကျ ကုတငျ 300 နဲ့ 400 ကွားရှိမယျ။အဲ့ ICU 40 လုပျနိငျဖို့ တခွား ဆေးရုံက မဆေ့ေးဆရာဝနျတှကေို ဆှဲစိထားရလို့ ခှဲစိတျမှုတှေ ရပျထားရတယျ။ ရိုးရိုးလူနာတှလေညျး ကိုဗဈ
ကွောငျ့ ဆေးရုံတှေ၊ ခှဲခနျးတှနေားထားလို့ တျောတျော တိုငျပတျနကွေပွီ။ အခု လကျရှိ လူနာ 150 ကြျော၊ သတော6ယောကျ၊ ICU က ပွနျကောငျးတာ2ယောကျလောကျဆိုတော့ လူနာအယောကျ တဈရာမှာ ငါးယောကျ 5% ICU ရောကျမယျဆိုတဲ့ နိုငျငံတကာ အခြိုးနဲ့ မွနျမာပွညျနဲ့ ကှကျတိပဲ။အဲ့တော့ ပွနျတှကျရငျ positive 800 တပွိုကျနကျ ဆေးရုံတကျရရငျ ICU ပွညျ့ပွီ။ နိုငျငံတကာကို ပွနျကွညျ့ရငျ တဈယောကျက တဈဆယျ ၊ တဈဆယျက
တဈရာဖွဈဖို့သာကွာတာ၊ တဈရာက တဈထောငျဖွဈဖို့ဆိုတာ ခဏလေး။ တဈထောငျက တဈသောငျးဖွဈဖို့ပိုမွနျ၊ တဈသိနျးက တဈသနျးဖွဈဖို့ လုံးဝလြှပျတပွတျ။အဲ့တော့ ကြှနျတျောတို့ တိုငျးပွညျဆငျးရဲတယျ။ တဈနလေု့ပျ တဈနစေ့ားမြားတယျ။ ထိုငျမစားနိုငျဘူး။ ဒါမှနျတယျ။ အစိုးရကော လူထုရော ကြှနျတျောရော မွနျမွနျပုံမှနျဖွဈခငျြတာပဲ။ စီးပှားရေးက ခရိုနီကနေ သူတောငျးစား အထိ ထိတယျ။ ဖွဈသငျ့တာကတော့ ပိတျရငျ ငတျမယျ။ ဖှငျ့ရမယျ။ ဒါလကျခံတယျ။
ဒါပမေယျ့ စညျးနဲ့ကမျးနဲ့ ဥပဒေ တငျးတငျးကပျြကပျြတော့ လုပျဖို့လိာမယျ။ mask ကို မဖွဈမနေ စနဈတကြ တပျခိုငျးရမယျ။ social distancing မဖွဈမနလေုပျရမယျ။ မလိုကျနာရငျ ဒဏျရိုကျရမယျ။ ပွငျးပွငျးထနျထနျကို စောငျ့ကွညျ့ ဒဏျရိုကျရမယျ။ esstential ဖှငျ့ရမယျ။ non-essential ပိတျရမယျ။ လူတှကေို အလကား ဆနျဆီဝမေယျ့အစား အစိုးရက လူမစုတဲ့ အလုပျဒီအခြိနျမှာ မြားမြားဖျောပေးသငျ့တယျ။ဆီဈေးလဲ ကနြခြေိနျ။ ဥပမာ
လမျးတှခေငျး ၊ မွောငျးဖျော၊ သနျ့ရှငျးရေး၊ cable ခြ၊ ဆေးသုတျ၊ construction လုပျ ဒါမြိုးတှပေေါ့လေ။ အလကားဆိုတာ ဘယျတော့မှ မကောငျးဘူး။ ရရှေညျမခံဘူး။ စညျးကမျးကပျြကပျြမတျမတျ၊ ခြိုးဖေါကျရငျ ပွငျးအထနျ အရေးယူဆိုရငျ စီးပှားရေးလေးလညျး ဆကျသှား၊ ရောဂါလေးလညျး သိပျမဆိုး ဖွဈနိုငျပမေယျ့ ဒီပုံအတိုငျး လူတှေ စားဝတျနရေေးဆိုပွီး လုပျခငျြတာလုပျ လှတျထားရငျတော့ ခုန လူနာ 800 ဆေးရုံတပွိုငျထဲ တကျရပွီဆိုတာနဲ့ ရားတရားသာ အောကျမပေ့တေော့လို့ ပွောရမလို ဖွဈနပွေီ။ အဲ့ကြ ထိမျးဖို့ခကျပွီ။
စီးပှားလညျးပကျြ လူလညျးသေ။ ဒီ post က အဆိုးမွငျတာတော့ မဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောက ဆရာဝနျဆိုတော့ ဆရာဝနျဆိုတာ ဘယျပွသနာကိုမဆို ခဉျြးကပျရငျ safety first၊ အဆိုးဆုံးတှကေို ပွငျဆငျ၊ အဆိုးဆုံးဖွဈနိုငျတာတှေ လူနာကိုရှငျးပွနကေဆြိုတော့ နားလညျပေးကွပါလို့။အဆိုးဆုံးအတှကျ ကောငျးကောငျး ပွငျဆငျလာခဲ့ရငျ တျောတျောရှဲတဲ့ လူနာတောငျပွနျကောငျးတတျပွီး၊ အစကတဲက ကောငျးတဲ့လူနာ အေးဆေးပါ၊ ကောငျးသှားမှာပါဆိုပွီး ပေါ့ဆရငျ နောကျကနေ မကျြကလဲဆနျပွာ ဘယျလောကျလိုကျရတတျတယျဆိုတာ ဆရာဝနျတိုငျး အသိပါ။
Credit: Dr.Myo Htet Aung
ယခု သတင်းကို ( Dr.Myo Htet Aung ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်ပေါ့ဆမှုကြောင့် ကိုဗစ် စိုးရိမ်ရေမှတ် နီးလာပြီဖြစ်ကြောင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးလိုက်တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ဦးရန်ကုန်ကတော့ ဆရာဝန် အမြင်အရ စိုးရိမ်ရေမှတ်နဲ့ နီးနီးလာပြီ လူတွေလည်း အရင်လို အများကြီး၊ ကားတွေလည်း ပြန်ပိတ်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ပြန်ထိုင်ကြ၊ ဆင်‌‌ခြေဖုံးတွေမှာဆို ဘီယာဆိုင်တွေတောင် နေပူသလိုလိုနဲ့
လေးတွေကာပြီး ဆိုင်မှာ ပြန်သောက်လို့ရပြီ။ဆိုက်ကားဂိတ်တွေမှာ ဈေးတွေမှာ ပြန်စည်ကားပြီ။ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေလည်း ရေနွေးကြမ်းဝိုင်းနဲ့ အေးအေးလူလူဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးလို့။ စားဝတ်နေရေး ထွက်တာတင်မက အင်ယားကန်စောင်းမှာလည်း အလည်အပတ်ထွက်သူတွေ အရင်နီးပါးပြန်ဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမယ့် mask ကို သေချာတတ်သူက တစ်ရာမှာ ဆယ်ယောက်၊ နောက် သုံးဆယ်က မေးစေ့မှာ၊ ခြောက်ဆယ်ကတော့ တပ်ကို မတပ်တာ။ အေးလေ
ဘာတပ်စရာလိုလဲ၊ မွန်းကမွန်းပါဘိသနဲ့၊ ဒီလောက်ပူတဲ့ ရာသီဥတုမှာ။ စားဝတ်နေရေးက ရှိသေးတယ်။ ထွက်ရမှာပဲ။ ဒါက လက်လုပ်လက်စား အတွေး။အင်းယားကန်သွား၊ အိမ်မှာလူစူ၊ ဝိုင်ဘီယာသောက်နေသူတွေကျ ဒီ ကိုဗစ်က အဲ့လောက်လဲမဆိုးပါဘူးကွာ။ နာမည်ကျော်တွေတောင် အိမ်ပြန်သွားပြီ။ လူတွေကိုက အကြောက်လွန်တာပါ။ လာ မက်ကရိုသွားတိုးမယ်။ အလကား ဒို့အစိုးရကို အပုတ်ချချင်လို့ အကျယ်ချဲ့တာ၊ အခု ဘာဖြစ်လဲ အေးဆေးပဲကို။ ဒါ လက်မည်းတွေ ခြောက်နေတာ။
အခု လူနာနည်းတယ် ကျသွားတယ်ဆိုတာ သင်္ကြန်တုန်းက ငြိမ်နေခဲ့တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး၊ ဒါကို တကယ်ကျတယ်ထင်ပြီး ပြန်ထွက်ရင် ပြန်တက်ဖို့ သေချာသလောက်ပဲ။တကယ်လုပ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့ မျက်ခုံးလှုပ်နေပြီ။ ကိုယ့် အ‌ခြေအနေကိုယ်သိတာကိုး။ ဒါ လက်ကုန်ထုတ်ထားတာ။ အောက်က ကိုးနဲ့ ရှိုးနေရတာဆိုတော့။ နည်းနည်းလေးပြောမယ်။အခု ရန်ကုန်မှာ ကိုဗစ်ကုတဲ့ ဆေးရုံ သုံးခုရှိတယ်။ ဝေဘာဂီ၊ တောင်ဥက္ကလာ နဲ့
ဖောင်ကြီး။ ဝေဘာဂီမှာ အသက်ရှုစက်နဲ့ ICU 15 လုံးရှိတယ်။ တောင်ဥက္ကလာမှာ ICU 15 လုံးရှိတယ်။ ဖောင်ကြီးမှာ လက်ရှိ ICU. 10 လုံးရှိတယ်။ ဒါအကုန်ပဲ။လက်ရှိ။ ဖောင်ကြီးက ပိုဆိုးလာရင် နောက်ထပ် ICU ကုတင် 30 ထပ်တိုးနိုင်မယ် ပြောတယ်။ ရိုးရိုးလူနာအတွက် ကုတင် 300 နဲ့ 400 ကြားရှိမယ်။အဲ့ ICU 40 လုပ်နိင်ဖို့ တခြား ဆေးရုံက မေ့ဆေးဆရာဝန်တွေကို ဆွဲစိထားရလို့ ခွဲစိတ်မှုတွေ ရပ်ထားရတယ်။ ရိုးရိုးလူနာတွေလည်း ကိုဗစ်
ကြောင့် ဆေးရုံတွေ၊ ခွဲခန်းတွေနားထားလို့ တော်တော် တိုင်ပတ်နေကြပြီ။ အခု လက်ရှိ လူနာ 150 ကျော်၊ သေတာ6ယောက်၊ ICU က ပြန်ကောင်းတာ2ယောက်လောက်ဆိုတော့ လူနာအယောက် တစ်ရာမှာ ငါးယောက် 5% ICU ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ အချိုးနဲ့ မြန်မာပြည်နဲ့ ကွက်တိပဲ။အဲ့တော့ ပြန်တွက်ရင် positive 800 တပြိုက်နက် ဆေးရုံတက်ရရင် ICU ပြည့်ပြီ။ နိုင်ငံတကာကို ပြန်ကြည့်ရင် တစ်ယောက်က တစ်ဆယ် ၊ တစ်ဆယ်က
တစ်ရာဖြစ်ဖို့သာကြာတာ၊ တစ်ရာက တစ်ထောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ခဏလေး။ တစ်ထောင်က တစ်သောင်းဖြစ်ဖို့ပိုမြန်၊ တစ်သိန်းက တစ်သန်းဖြစ်ဖို့ လုံးဝလျှပ်တပြတ်။အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတယ်။ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားများတယ်။ ထိုင်မစားနိုင်ဘူး။ ဒါမှန်တယ်။ အစိုးရကော လူထုရော ကျွန်တော်ရော မြန်မြန်ပုံမှန်ဖြစ်ချင်တာပဲ။ စီးပွားရေးက ခရိုနီကနေ သူတောင်းစား အထိ ထိတယ်။ ဖြစ်သင့်တာကတော့ ပိတ်ရင် ငတ်မယ်။ ဖွင့်ရမယ်။ ဒါလက်ခံတယ်။
ဒါပေမယ့် စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ဥပဒေ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်တော့ လုပ်ဖို့လိာမယ်။ mask ကို မဖြစ်မနေ စနစ်တကျ တပ်ခိုင်းရမယ်။ social distancing မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်။ မလိုက်နာရင် ဒဏ်ရိုက်ရမယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို စောင့်ကြည့် ဒဏ်ရိုက်ရမယ်။ esstential ဖွင့်ရမယ်။ non-essential ပိတ်ရမယ်။ လူတွေကို အလကား ဆန်ဆီဝေမယ့်အစား အစိုးရက လူမစုတဲ့ အလုပ်ဒီအချိန်မှာ များများဖော်ပေးသင့်တယ်။ဆီဈေးလဲ ကျနေချိန်။ ဥပမာ
လမ်းတွေခင်း ၊ မြောင်းဖော်၊ သန့်ရှင်းရေး၊ cable ချ၊ ဆေးသုတ်၊ construction လုပ် ဒါမျိုးတွေပေါ့လေ။ အလကားဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မကောင်းဘူး။ ရေရှည်မခံဘူး။ စည်းကမ်းကျပ်ကျပ်မတ်မတ်၊ ချိုးဖေါက်ရင် ပြင်းအထန် အရေးယူဆိုရင် စီးပွားရေးလေးလည်း ဆက်သွား၊ ရောဂါလေးလည်း သိပ်မဆိုး ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဒီပုံအတိုင်း လူတွေ စားဝတ်နေရေးဆိုပြီး လုပ်ချင်တာလုပ် လွှတ်ထားရင်တော့ ခုန လူနာ 800 ဆေးရုံတပြိုင်ထဲ တက်ရပြီဆိုတာနဲ့ ရားတရားသာ အောက်မေ့ပေတော့လို့ ပြောရမလို ဖြစ်နေပြီ။ အဲ့ကျ ထိမ်းဖို့ခက်ပြီ။
စီးပွားလည်းပျက် လူလည်းသေ။ ဒီ post က အဆိုးမြင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က ဆရာဝန်ဆိုတော့ ဆရာဝန်ဆိုတာ ဘယ်ပြသနာကိုမဆို ချဉ်းကပ်ရင် safety first၊ အဆိုးဆုံးတွေကို ပြင်ဆင်၊ အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်တာတွေ လူနာကိုရှင်းပြနေကျဆိုတော့ နားလည်ပေးကြပါလို့။အဆိုးဆုံးအတွက် ကောင်းကောင်း ပြင်ဆင်လာခဲ့ရင် တော်တော်ရွဲတဲ့ လူနာတောင်ပြန်ကောင်းတတ်ပြီး၊ အစကတဲက ကောင်းတဲ့လူနာ အေးဆေးပါ၊ ကောင်းသွားမှာပါဆိုပြီး ပေါ့ဆရင် နောက်ကနေ မျက်ကလဲဆန်ပြာ ဘယ်လောက်လိုက်ရတတ်တယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်တိုင်း အသိပါ။